Politika momba ny toekarena : andrasana ny antontanisa momba ny mponina | NewsMada
Ilaina ny fahafantarana marina ny isan’ny mponina fa tsy ny tombantombana fotsiny. Ho fahafantarana izany, najoro ao amin’ny Instat ny tetikasa fanisana ny mponina sy ny toeram-ponenana na ny RGPH (Recensement général de la population et de l’habitat). Tsy zava-baovao io tetikasa io ao amin’ny Instat, saingy olana hatramin’izay ny vola hanatanterahana azy.
Mitohy ny ezaka ho fandresen-dahatra ireo mpamatsy vola hanampy ity tetikasa RGPH ity, mitentina 32 tapitrisa dolara eo ho eo. Mialoha izany anefa, tokony hoporofoin’ny fanjakana aloha ny fahavononany hitondra ny anjarany. Efa misy natokana ho an’izany ao amin’ny tetibolam-panjakana 2016, nefa mbola lavitra, tsy misy afa-tsy 300.000 dolara monja. “Ny andrasana amin’ny fanjakana, tokony handrotsaka 25 % na 30 %. Ny any amin’ireo tany mampiasa teny frantsay toa antsika ao Afrika, efa tonga 80 % ny anjaran’ny fanjakana amin’izany”, hoy ny tale jeneralin’ny Instat, Rajaonera Ida Clément.
Andrasan’ireo mpamatsy vola mafy ity antontanisa momba ny mponina ity, satria miainga avy amin’izany ny famaritana ny tetikasa ho an’ny fampandrosoana. Firy isan-jato marina ny mahantra ary mahantra amin’ny lafiny inona, ahoana ny fanadihadiana ny mponina amin’ny tanàn-dehibe maro ? Ilàna fanamarinana avokoa ireo hamaritana politika momba ny asa, fanamboarana fotodrafitrasa, fanatsarana ny toeram-ponenana, sns. Eto Madagasikara, tarehimarika efa tany amin’ny taona 1993 ny hoe miisa 23 tapitrisa ny Malagasy. Maro ny fiovana eto amin’ny firenena tao anatin’izay 20 taona mahery izay.
Koa andrasana ny fahampian’ny vola hoenti-manao io asa goavana io. Efa misy ny politika momba izany, koa raha ampy ny vola, hatomboka amin’ny 2017 ary tokony hivoaka amin’ny 2018. Misy ao amin’ny Instat ny komitim-pirenena mamolavola ny politika ara-bola rehetra momba ny RGPH sy izay fitaovana hampiasana ho an’ny tanàn-dehibe sy ny any ambanivohitra.